Posted On:July 16,2007
Author : नेपालजापान डट कम
हामीले सवैभन्दा महत्वपूर्ण मित्रता भूटानी विद्यार्थी जाङवो दागोसँग वढाएका छौं । वर्षौंदेखि नेपाली भाषी भूटानीहरुलाई शरणार्थी वनाएर लखेटेको कथालाई मनभित्रै मारेर भएपनि इन्जिनियर दागोलाई नेपाल र नेपाली जातीको परिचय हार्दिकतापूर्वक दिइरहेका छौं । हामीसँगको जुनसुकै भेटमा पनि उनी नेपाली भाषा वोल्न मन पराउँछिन् । हैन हो दाजु – हालखवर कस्तो छ ? भन्दै तेस्रो तलामा टुप्लुक्क आइपुग्छिन् । हामीपनि उनलाई नेपालीमै वोल्ने वातावरण वनाइदिन्छौं । भूटानी दागोले नेपाली वोलेको सुन्दा अन्य विद्यार्थीहरु अचम्म मान्दै कौतुहलता ब्यक्त गर्छन् । यस्तो अवस्थामा दागो सान का सहज उत्तर छन् – भूटानको ५० प्रतिशत जनसंख्या नेपाली भाषी छन्, सवै भूटानीले नेपाली भाषा सामान्यरुपमा वोल्न जान्दछ । उनले यसो भनिरहदा नेपालको भाऊ वढेको सम्झेर हामी भने मख्ख पर्छौं । हाम्रा हरेक जमघट र समारोहमा भूटानीलाई निम्ता गर्न कहिल्यै छुटाउँदैनौं यसो गर्नुको हाम्रो एउटै स्वार्थ छ भूटानको भावी पुस्ताको दिमागमा नेपाली जाति दयालु, इमान्दार र मिलनसार हुन्छन् भन्ने छाप पार्ने ताकि वाँकी नेपालीलाई जोङ्खाभाषीहरुले सम्मानपूर्वक वाच्न दिऊन् ।
भूटानको निर्माण तथा आवास मन्त्रालयका वरिष्ठ योजना अधिकृत ड्रुक्पा डंकर यूएनसिआरडी नागोयाको ३५ औं तालिममा भाग लिन आएका आदिवासी भूटानी हुन् । ६ हप्ता लामो तालिमका सुरुवाती दिनहरु दिक्दार लाग्दो मानेका ड्रुक्पा नेपाली सहपाठी रवीन्द्र राई लाई भेटेर फुरुङ्ग भए । रवीन्द्रजीसँगको भेटले उनको जापान वसाई रसिलो भयो, खानपीन अध्ययन र प्रतिवेदन तयारीमा उनले रविन्द्र राईलाई नै साथी वनाए, परिणामतः उनको घरप्रतिको सम्झना हराउँदै गयो । कोवेको प्रकोप न्यूनीकरण केन्द्रमा भेटिएका डा. विष्णुहरि पाण्डेसँगको भेटले त उनी झनै हौसिए । आफ्नै पल्लाघरे छिमेकी जस्तो सम्झेर उनको सिकाई प्रक्रिया अघि वढ्यो डा. पाण्डेसँग । जुनको १५ तारिखमा टोकियो क्षेत्रको सुमिधा सिटी अफिसमा मसँग भेट हुँदा भुटानी ड्रुक्पा १२ हात परवाटै नमस्ते छ है भन्दै म भएतर्फ लम्किए । कुराकानी कै अवसरमा उनको कथन थियो – नेपालीहरुको अन्तराष्ट्रिय उपस्थिति तिव्रगतिमा प्रभावी हुँदैछ । आशा छ यसखालको प्रभाव अझ विस्तार हुनेछ, जसवाट भुटानीहरुले पनि भविष्यमा फाइदा उठाउन सक्नेछन् ।
"The British, the Gurkhas: Worlds Apart?: By Satis Shroff (Source: The Kathmandu Post)"